China Usb Charger 2-Port 2.4A NV-A0086 mpanamboatra sy mpamatsy | YIWU
Seranana USB tanteraka 2
Min Order / Ctn 500
Fampisehoana premium:Ny fivoahan'ny Dual-USB miaraka amin'ny 5V / 2.4A amin'izao fotoana izao ary ny fidirana miaraka amin'ny 110-240V dia ahafahanao mandefa fitaovana finday roa miaraka amin'ny hafainganam-pandeha avo lenta. Afaka mamonjy ny fotoanao izy.
Fiantohana fiarovana:Ny USB Charger dia voamarina araka ny fenitra ETL. Ny akorany PC dia mampiasa fitaovana avo lenta fireproof. Fanaraha-maso fiarovana voaaro, usb charger miaraka amina karazana fiarovana mba hanomezana faribolana fohy, fanafanana be loatra, fandefasana ankehitriny, fanamafisam-bola be loatra, Fiarovana tsy andoavam-bola. Mijanona ny vidiny rehefa feno ny batterin'ny fitaovana. Azo antoka ampiasaina.
Fampifanarahana:Ny charger Phone dia mifanaraka amin'ny ankamaroan'ny telefaona finday sy fitaovana hafa tohanan'ny USB, toy ny iPhone 7 plus 6S Plus 6 Plus, iPad Pro, iPod touch, Samsung Galaxy S7 S7edge, Note 5, Nexus 6P 5X, Oneplus One / 2, HTC, LG, Nokia, Blackberry, Motorola, mpilalao MP3, finday avo lenta, mpamaky e-book, kindle, mpandahateny Bluetooth, sns. Omeo mety kokoa amin'ny fiainanao.
Universal: Fampidirana: AC110-240, Output: DC5V2.4A miaraka amina panneaux roa, Dual-USB dia ahafahanao mandefa fitaovana finday roa miaraka amin'ny hafainganam-pandeha.
Fiampangana miaraka:Adapter adapter an-trano dia ampandehano ny fitaovana ampiasainao amin'ny alàlan'ny fifandraisana tariby USB. Ampidiro fotsiny ny tariby USB, ary ampidiro ao amin'ny rindrina ilay adaptatera. Ampidino miaraka amin'izay ny fitaovana 2 rehetra.
Mazava sy mora entina:Ampidiro fotsiny ny tariby USB, ary ampidiro ao amin'ny rindrina ilay adaptatera. Compact, maivana, mora entina, tsara tarehy, tehirizina.
Teo aloha: Family Speaker an'ny Bluetooth ao amin'ny NV-8942
Manaraka: Speaker Bluetooth miaraka amin'ny mpitazona finday 500mah NV-8831
Data Cable 3 ao amin'ny 1 NV-B0014
Headphones Bluetooth Miaraka amin'i Mic, Headset maimaim-poana amin'ny tanana, Cable Charger an'ny telefaona, Headset Miaraka amin'i Mic, Apple Car Charger, Earphones tsy misy tariby,